Man United oo barbaro la gashay Burnley+SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Man United oo barbaro la gashay Burnley+SAWIRRO
Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa barbaro 2-2 la gashay Burnley kulan ka tirsan Premier League oo ku soo dhammaaday haatan garoonka Old Trafford.
Jose Mourinho kooxdiisa ayaa ka soo laabtay labo goo loo lagu hoggaamiyey qeybta hore, waxaana labada goolba u saxiixay Jesse Lingard.
Kooxda kubadda cagta Burnley ayaa 2-0 ku marisay qeybta hore ee ciyaartii ka dhacaday garoonkeeda Old Trafford, balse qeybtii dambe ayaa laga daba keenay.
Daqiiqaddii 3’aad ee bilowgii ciyaarta Burnley ayaa la timid goolka furitaanka kulankan, waxaana kubbad laad xor ahayd oo dadab laga soo qaaday ka faa’iideystay oo dhaliyey Ashley Barnes, Man United ayaana lagu hoggaamiyey 1-0.
Markale Burnley ayaa la timid goolka labaad ee ciyaarta, waxaana laad xor ah oo toos ah oo uu qaladkeeda lahaa Young u dhaliyey 36’daqiiqo Steven Defour, Man United oo iyadoo gurigeeda joogta ayaana lagu hoggaaminayo 2-0 qeybta hore.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta Jose Mourinho ayaa ciyaarta bedel ku soo galiyey Jesse Lingard iyo Henrikh Mkhitaryan, isagoo garoonka ka saaray Zlatan Ibrahimovic Marcos Rojo.
Dardar fiican ayey la timid qeybtii labaad kooxda Man United, waxaana hal gool u soo guday 53’daqiiqo Jesse Lingard, kaddib markii uu cirib daba mariyey goolhayaha Burnley, kaddib kubbad uu dadab ka soo dhigay Ashley Young kulanka ayaana noqday 2-1 lagu hoggaaminayey Man United.
Daqiiqadihii lagu daray ciyaarta intii lagu guda jiray Man United ayaa la timid goolka barbaraha, waxaana markale u dhaliyey Jesse Lingard, kaddib markii uu ka faa’iideystay kubbad uu laaday Young oo ku dhacday mid ka mid ah xiddigaha Burnley, kulanka ayuuna ka dhigay barbaro 2-2 sidaas ayeyna gar isku mid ah ciyaartu ugu soo gabagabowday.